သတင်း - နွေဦးရာသီတွင် နွားများနှင့် သိုးများကို ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကပ်ပါးဥတွေက ဆောင်းရာသီမှာ မသေပါဘူး။နွေဦးရာသီတွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာသောအခါ ကပ်ပါးကောင်ဥများ ကြီးထွားရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် နွေဦးရာသီတွင် ကပ်ပါးကောင်များကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်မှာ အထူးခက်ခဲသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ချမ်းအေးသော မြက်ပင်ရာသီကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် နွားနှင့်သိုးများသည် အာဟာရဓာတ်များ ချို့တဲ့လာကာ ကပ်ပါးကောင်များသည် တိရစ္ဆာန်များတွင် အာဟာရစားသုံးမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေကာ ကျွဲ၊ နွားများနှင့် သိုးများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ ရောဂါခုခံမှု အားနည်းခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ .
Deworming လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
1. မီပိုးသတ်ခြင်း။၊ ကျွဲနွားများနှင့် သိုးများ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ- အပြင်းဖျားနေသော ကျွဲနွားများနှင့် သိုးများကို အမှတ်အသားပြုပါ၊ သန်ကောင်ထုတ်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး သီးခြားခွဲထားကာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက် သန်ကောင်များကို မှတ်သားပါ။ကွဲပြားသောဆေးဝါးများကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် နွားနှင့်သိုးရှိ အခြားသောရောဂါများကို ကုသစဉ်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကို လျှော့ချပါ။
2. Deworming သည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့် ကပ်ပါးကောင်များကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်- နွားများတွင် ကပ်ပါးကောင်များစွာရှိသည်၊ ဥပမာ၊ Ascaris၊ Fasciola hepatica၊ တိပ်ပိုး၊ ဝမ်းကိုက်၊ နွားမှခြစ်၊ နွားချေးမွှားများ၊ တိရစ္ဆာန် eperythropoies စသည်ဖြင့်၊ ကပ်ပါးကောင်အမျိုးအစားကို တိကျသောနည်းလမ်းဖြင့် ပိုးသတ်ရန်အတွက် လက်တွေ့လက္ခဏာများနှင့်အညီ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
3. ပိုးမွှားကာလတွင်၊ အညစ်အကြေးများကို အာရုံစူးစိုက်သင့်သည်- အပူစုဆောင်းခြင်း၊ ကပ်ပါးဥများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချခြင်းဖြင့်၊မွေးမြူရေးခြံအများအပြား၏ ပိုးသတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် မကောင်းသောအညစ်အကြေးများ မစုစည်းဘဲ ဆင့်ပွားကူးစက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
4. ပိုးမွှားပေါက်သည့်ကာလအတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖြတ်ကျော်သုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်- ပိုးကောင်မွေးမြူသည့်နေရာရှိ ပိုးမွှားမွေးမြူရေးဧရိယာရှိ ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများကို ပိုးမွှားမွေးမြူသည့်ဧရိယာတွင် အသုံးမပြုနိုင်သည့်အပြင် ၎င်းတို့ကို ကျွေးသည့်နေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။မတူညီသော အကာအရံများတွင် ကပ်ပါးဥများ ကူးဆက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး ပိုးဝင်စေပါသည်။
5. ကျွဲနွားများနှင့် သိုးများကို ကောင်းစွာမလုံခြုံသည့်အပြင် ဆေးထိုးရန်နေရာမရှိပါ- အရေပြားအောက်ထိုးဆေးနှင့် အကြောထိုးဆေးသည် ရှုပ်ထွေးနေသဖြင့် ဝမ်းမသာအောင် သန်ကောင်ထွက်နှုန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။Fixed Protection သည် ဆေးအရည်များ ပေါက်ကြားမှုမဖြစ်စေရန် တိရိစ္ဆာန်များအတွင်းသို့ ဆေးထိုးအပ်များ၊ သွေးထွက်ဆေးထိုးအပ်များနှင့် ထိရောက်မှုမရှိသော ဆေးထိုးအပ်များ ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။နွားများနှင့် သိုးများကို ပြုပြင်ကာကွယ်ရန်၊ ကြိုးအစုံနှင့် နှာခေါင်းပလာများကဲ့သို့သော ထိန်းညှိကိရိယာများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသော နွားများနှင့် သိုးများကို ပြုပြင်ပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို ပိုးသတ်နိုင်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွဲနွားများနှင့် သိုးများ၏ အလွန်အကျွံအပြုအမူကို လျှော့ချရန် နွားများနှင့် သိုးများ၏ မျက်လုံးနှင့် နားများကို ဖုံးအုပ်ရန် အနက်ရောင်အ၀တ်စကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊
6. ကိုရွေးချယ်ပါ။ပိုးသတ်ဆေးများဆေးဝါးများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိပါ- ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပိုးသတ်ဆေးအာနိသင်ရရှိစေရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်၊ ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး အဆိပ်သင့်မှုနည်းပါးသော ဝမ်းနုတ်ဆေးများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဘေးကင်းရေးအကွာအဝေး၊ အနိမ့်ဆုံးအဆိပ်သင့်မှုပမာဏ၊ သေစေသောဆေးပမာဏနှင့် အသုံးပြုထားသော ပိုးသတ်ဆေးများ၏ သီးခြားကယ်တင်ရေးဆေးဝါးများနှင့် ရင်းနှီးပါစေ။
7. နေ့ခင်း သို့မဟုတ် ညနေတွင် ပိုးသတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်- အကြောင်းမှာ နွားနှင့် သိုး အများစုသည် အမှိုက်စုဆောင်းခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် အဆင်ပြေသည့် ဒုတိယနေ့တွင် နေ့ခင်းဘက်တွင် ပိုးကောင်များကို စွန့်ထုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
8. အစာကျွေးနေစဉ်နှင့် အစာကျွေးပြီးနောက် တစ်နာရီအတွင်း ပိုးမ၀င်ပါနှင့်၊ တိရစ္ဆာန်များ၏ ပုံမှန်အစာကျွေးမှုနှင့် အစာခြေကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။အစာကျွေးပြီးနောက် တိရစ္ဆာန်များသည် နွားများနှင့် သိုးများကို ပြုပြင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုနှင့် ပျက်စီးမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန်အတွက် ဗိုက်ပြည့်နေမည်ဖြစ်သည်။
9. မှားယွင်းသော စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်း-
အရေပြားအောက်၌ ထိုးသင့်သော ဆေးဝါးများသည် ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းအတွင်းပိုင်းအရ ရလဒ်မကောင်းပါ။နွားများအတွက် လည်ပင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် မှန်ကန်သော အရေပြားဆေးထိုးသည့်နေရာကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။သိုးများအတွက်၊ ဆေးထိုးသည့်နေရာကို လည်ပင်း၏ဘေး၊ နောက်ကျောဘက်၊ တံတောင်ဆစ်၏နောက်ဘက် သို့မဟုတ် ပေါင်အတွင်းပိုင်း၌ အရေပြားအောက်၌ ထိုးနိုင်သည်။ထိုးသောအခါတွင် အပ်သည် ခေါက်၏ခြေရင်းမှ အရေပြားဆီသို့ ၄၅ ဒီဂရီအထိ လှည့်ကာ အပ်၏ သုံးပုံနှစ်ပုံကို ဖောက်ကာ၊ အပ်၏ အတိမ်အနက်ကို အရွယ်အစားအလိုက် သင့်လျော်စွာ ချိန်ညှိပေးသည်။ တိရစ္ဆာန်။သုံးတဲ့အခါခံတွင်း ကယ်တင်ဆေးလယ်သမားများသည် အဆိုပါ ပိုးသတ်ဆေးများကို အစာကျွေးရန်အတွက် အာရုံစူးစိုက်မှုတွင် ရောနှောပြီး အချို့တိရစ္ဆာန်များ အစာပိုစားကာ အချို့တိရစ္ဆာန်များ စားသုံးမှု လျော့နည်းစေကာ သန်ကောင်၏ အာနိသင်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။
10. အရည်များ ယိုစိမ့်ပြီး ဆေးထိုးရန် အချိန်မီ ပျက်ကွက်ခြင်း- ၎င်းသည် ပိုးသတ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သက်ရောက်စေသည့် အဖြစ်များသော အချက်ဖြစ်သည်။တိရိစ္ဆာန်များအား ထိုးဆေးပေးသည့်အခါ ထိုးဆေးများ နှင့် အရည်များ ယိုစိမ့်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးအတွက် ဆေးဝါးများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပမာဏသည် ယိုစိမ့်မှု ပမာဏအပေါ် မူတည်သော်လည်း အချိန်မီ ဖြည့်စွက်ရပါမည်။
11. Deworming ပရိုဂရမ်နှင့် ပိုးကောင်များကို ပုံမှန်သတ်မှတ်ပါ-
ပိုးသတ်ခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုပြုလုပ်ကာ သတ်မှတ်ထားသော ပိုးသတ်ခြင်းအစီအစဉ်အရ ပုံမှန် ပိုးကောင်ထုတ်ခြင်းအား စစ်ဆေးမေးမြန်းရန် လွယ်ကူပြီး ကပ်ပါးကောင်များကို တားဆီးထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူသော ပိုးသတ်ခြင်းမှတ်တမ်းကို ထားရှိပါ။ပိုးသတ်ခြင်းအာနိသင်သေချာစေရန် ပိုးသတ်ခြင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်း- ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပိုးသတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိစေရန်အတွက် ပိုးသတ်ခြင်း 1-2 ပတ်ကြာပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ် ပိုးသတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါက ပိုးသတ်ခြင်းမှာ ပိုမိုတိကျပြီး ထိရောက်မှု ပိုကောင်းပါသည်။
ပိုးကောင်များကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် အစုလိုက်ကြီးပြီး နွေဦးပေါက်ရာသီတွင် သားလောင်းပိုးသတ်နည်းကို ခံယူပါ။ဆောင်းရာသီတွင် Deworming သည် ဆောင်းရာသီတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ပေါက်ဖွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဆောင်းရာသီတွင် သားလောင်းများ ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ပြင်းထန်သောကပ်ပါးကောင်များရှိသည့်နေရာများအတွက် ဆောင်းရာသီနှင့် နွေဦးရာသီများတွင် ectoparasitic ရောဂါများကိုရှောင်ရှားရန် ဤကာလအတွင်း ပိုးသတ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်ထည့်နိုင်သည်။
တိရစ္ဆာန်ငယ်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် သိုးသငယ်နှင့် နွားသငယ်များ၏ ပုံမှန်ကြီးထွားမှုနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ယခုနှစ် သြဂုတ်လမှ စက်တင်ဘာလတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပိုးကောင်များကို သုတ်သင်လေ့ရှိသည်။ထို့အပြင်၊ နို့မဖြတ်မီနှင့် နို့မဖြတ်ပြီးနောက် ခွေးကလေးများသည် အာဟာရဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကြောင့် ကပ်ပါးပိုးများကို ခံရနိုင်ချေရှိသည်။ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်တွင် အကာအကွယ် ပိုးသတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
မီးဖွားခါနီး ဆည်များ၏ ပိုးသတ်ခြင်းသည် မီးဖွားပြီးနောက် 4-8 ပတ်အတွင်း မစင်မွှားဥကို ရှောင်ရှားသည်။ကပ်ပါးညစ်ညမ်းမှု မြင့်မားသောနေရာများတွင် ရေကာတာများသည် မီးဖွားပြီးနောက် ၃-၄ ပတ်အတွင်း သန်ကောင်များကို သုတ်သင်ရပါမည်။
ပြင်ပမှဝယ်ယူထားသော နွားနှင့်သိုးများအတွက် ရောနှောထားသော သိုးစုထဲသို့ မဝင်မီ 15 ရက်အလိုတွင် ပိုးသတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီး စက်ဝိုင်းမပြောင်းမီ တစ်ကြိမ် ပိုးသတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
12. ပိုးသတ်သောအခါတွင် အုပ်စုငယ် စမ်းသပ်မှုကို ဦးစွာပြုလုပ်ပါ- ဆိုးရွားသော တုံ့ပြန်မှု မရှိပြီးနောက်တွင် အုပ်စုကြီးဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါ။